ओलीलाई बालकोटमा माधव, झलनाथ, बामदेवले किन यसो भने ?::Pathivara News
मृत छोराको वीर्यबाट राजश्री यसरी बनिन् हजुरआमा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतीको विवाद टुङ्गियो ! नाम सहित सार्वजनिक ओली सरकारपछि पनि देउवाकै निर्देशनमा चल्दै आइजिपी आर्थिक लेनदेनका आधारमा डिआइजी–एसएसपीमा बढुवा गर्ने योजना खुट्टा ढोग्दै देउवाले भने मेरो कारण चुनाव हारेको होईन, प्रकाशमान सिंह जी ,हामीले भारतको बिरुद्ध बोल्न सकेनौ सँगै सुतेका प्रेमीले प्रेमिका झुण्डिएको थाहै पाएनन
ओलीलाई बालकोटमा माधव, झलनाथ, बामदेवले किन यसो भने ?
काठमाडौं शनिवार साँझ बालकोटमा पार्टी एकताबारे समीक्षात्मक बैठक गर्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल, सुवास नेमवाङलगायत एमाले शीर्ष नेताहरु भेला भए ।
सबैजसो नेताले अध्यक्षलाई सुझाव दिए, ‘जे–जे दिँदा एकता हुन्छ, त्यो दिऊँ तर एकतालाई सार्थक पारौं । अन्य शक्तिलाई खेल्ने मौका नदिऊँ । दुईवटा सहअध्यक्ष दिँदा हुन्छ वा अध्यक्ष नै सुम्पिँदा हुन्छ, जे जसो गर्दा पनि अब तयार होऊँ ।’ तर, यसो गरौं भन्ने स्पष्ट निर्णय भने त्यहाँ भएन ।
बरु आइतबार माओवादी अध्यक्षसँग केपी ओलीले नै निर्णायक वार्ता गर्ने तय भयो । तर, आइतवार पनि वार्ताको वतावरण भने बनने ।
सोमबार बल्ल आइसब्रेक हुन सक्यो । आइतबार स्थायी समिति बैठकमा पार्टी एकताबारे अरु नेताले जिज्ञासा राख्दा खै उहाँहरु जति दियो, त्यति नै धेरै माग गर्न थाल्नुभाछ’ भनेर संक्षिप्त तर निराशाजनक जवाफ दिएका ओली छलफललार्ई निर्णायक बनाउन कस्निुका पछाडि बालकोट बैठकमा भएको सूक्ष्म छलफल र विमर्श कारक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सहभागी स्रोतका अनुसार माओवादीसँग एकता हुँदा र नहुँदा सत्ता राजनीतिमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे गभीर छलफल भएको थियो । संविधानको धारा, उपधारा, केलाउँदै नेताहरुले जोडघटाउ र हिसावकिताव निकालेका थिए । आगामी सरकारका के के विकल्प हुन सक्छन भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर समेत विमर्श भएको थियो । जनआस्थामा समाचार छ ।
मृत छोराको वीर्यबाट राजश्री यसरी बनिन् हजुरआमा
राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतीको विवाद टुङ्गियो ! नाम सहित सार्वजनिक
ओली सरकारपछि पनि देउवाकै निर्देशनमा चल्दै आइजिपी आर्थिक लेनदेनका आधारमा डिआइजी–एसएसपीमा बढुवा गर्ने योजना
खुट्टा ढोग्दै देउवाले भने मेरो कारण चुनाव हारेको होईन, प्रकाशमान सिंह जी ,हामीले भारतको बिरुद्ध बोल्न सकेनौ
दुई वर्ष पहिले क्यान्सरका कारण छोरा गुमाएकी एक आमाले उनलाई ‘पुनर्जीवित’ गरेकी छन् । पुणेकी ४९ वर्षीया शिक्षक राजश्री पाटिलले एक सेरोगेट आमाको मदतमा...
सँगै सुतेका प्रेमीले प्रेमिका झुण्डिएको थाहै पाएनन
बार्षिक राशिफल: कस्तो रहनेछ तपाइको लागि नयाँवर्ष २०७५ बार्षिक राशिफल